သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper, Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper တရုတ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်း
ကြေးနီ granule စက်
လူမီနီယမ် Composite Panel ကို Separator
cable ကိုဝါယာကြိုး Cutter
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PVC ဂဟေစက်
 လျ：86-15990659864 အီးမေးလ်ပို့ရန်：sales@mrecycling.cn
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer , Trade Company , Distributor/Wholesaler , Service
ဖေါ်ပြချက်:သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper, သံချပ်ကာ Cable ကို Stripper, cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper,,,
ကြေးနီ granule စက် >
Cable Cable Granulator
ကြေးနီဝါယာကြိုး Granule စက်
Cable ကို Granulator စက်
ကြေးနီ granule များအတွက်ပေါ်ကို
လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးချွတ် Tools များ
Benchtop ဝါယာကြိုးချွတ်စက် >
ဝါယာကြိုး Stripper ဆက်စပ်ပစ္စည်း Tools များ
သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper
အကြီးစား Duty ဝါယာကြိုး Stripper
အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်။ စက်ပစ္စည်းများကို ၀ တ်ဆင်ပါ
Home > ထုတ်ကုန်များ > စက်မှုဝါယာကြိုးချွတ်စက် > သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper
ကြေးနီ granule စက် ( 42 )
Cable Cable Granulator ( 26 )
ကြေးနီဝါယာကြိုး Granule စက် (9)
ကြေးနီဝါယာကြိုးပြန်လည်အသုံးပြုစက် (4)
Granule စက်အစားထိုးအစိတ်အပိုင်းများ (3)
ဝါယာကြိုးကြိတ်စက် ( 24 )
Cable ကို Granulator စက် (6)
ကေဘယ်လ်ကြိတ်စက် ( 1 )
သံလိုက် Separator ( 1 )
ကြေးနီ granule များအတွက်ပေါ်ကို ( 1 )
ဓါးကြိတ်ခွဲစက် (7)
လူမီနီယမ်နိုင်သလား Presser (7)
ဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 367 )
စီးပွားဖြစ်ဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 168 )
ကေဘယ်ကြိုးချည်စက် ( 24 )
အလိုအလျောက်ဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 30 )
ကြေးနီအဝတ်ချွတ်စက် ( 32 )
လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးချွတ် Tools များ ( 19 )
ဝါယာကြိုးချည်ရန်စက်များ ( 39 )
ဝါယာကြိုးချွတ်ကိရိယာများခြစ် ( 16 )
ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ချွတ်စက် (6)
ချွတ်စက်အပိုပစ္စည်းများ ( 10 )
အလိုအလျောက်ကြေးနီဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 23 )
Benchtop ဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 77 )
Benchtop ကြေးနီချွတ်စက် ( 34 )
Benchtop ကေဘယ်လ်ကြိုးချွတ်စက် ( 16 )
cable ကိုဝါယာကြိုးအခွံစက် ( 12 )
ချည်ထားသောဝါယာကြိုးစက် ( 14 )
ဝါယာကြိုး Stripper ဆက်စပ်ပစ္စည်း Tools များ ( 1 )
စက်မှုဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 75 )
သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper ( 35 )
အကြီးစား Duty ဝါယာကြိုး Stripper ( 18 )
စက်မှု Cable ကိုချွတ်စက် ( 16 )
အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်။ စက်ပစ္စည်းများကို ၀ တ်ဆင်ပါ (6)
လက်စွဲစာအုပ်ဝါယာကြိုးချွတ်စက် ( 20 )
လူမီနီယမ် Composite Panel ကို Separator ( 38 )
ရေဒီယိုရောင်ခြည်ပြန်လည်စက် ( 1 )
မော်တော်ပြန်လည်အသုံးပြုစက် ( 1 )
cable ကိုဝါယာကြိုး Cutter ( 20 )
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း PVC ဂဟေစက် ( 11 )
သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper, သံချပ်ကာ Cable ကို Stripper ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
သံချပ်ကာဝါယာကြိုး Stripper ပြန်လည်အသုံးပြုစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသုံးပြုသောလျှပ်စစ်ကြေးနီဝါယာကြိုးချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီဝါယာကြိုးမှစ။ insulator တွင်လည်းချွတ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Ferrous ကြေးနီဝါယာကြိုးပြန်လည်အသုံးပြုစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီကြိုးကြိုးပြန်လည်အသုံးပြုစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တယ်လီဖုန်းဝါယာကြိုးချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ပြန်လည်အသုံးပြုရန်အတွက်ကြေးနီကြိုးကြိုးချည်ခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီဝါယာကြိုး Stripper ချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီဝါယာကြိုးချွတ်စက်ရောင်းချခြင်း  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် Cable ကိုဝါယာကြိုးခြစ် Stripper  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရောင်းရန်အတွက်ကြေးနီကြိုးချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Cable ကြိုးချွတ်စက်အိန္ဒိယကိုရောင်းရန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဝါယာကြိုးချွတ်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အလိုအလျောက် Cable ကိုချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီ Cable ကိုပြန်လည်အသုံးပြုစက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရှင်းလင်းသောတောက်ပသောကြေးနီကြိုးကြိုး Stripper  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လျှပ်စစ်ကြိုးကြိုးချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီ Cable ကို Slitter စက်ခြစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရောင်းရန်အတွက်ကြေးနီကြေးနီဝါယာကြိုးချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကြေးနီဝါယာကြိုး Granulator ချွတ်စက်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ရောင်းရန်ဝါယာကြိုး Granulator  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
သံချပ်ကာဝါယာကြိုး Stripper ပြန်လည်အသုံးပြုစက်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 1000 - 1100 / Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: 100pcs
ဝါယာကြိုးဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ချွတ်စက် M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယမ်) အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်ကြိုး၊ မြင့်မားသောဗို့အားကေဘယ်လ်၊ optical ကေဘယ်ကြိုး၊...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 700 / Piece/Pieces
Supply နိုင်ခြင်း: 1000
ဝါယာကြိုးချွတ်စက်ကိုအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ Adjust! အဆိုပါဓါးအလွန်ချွန်ထက်ပါ! လက်ချွတ်ချိန်ထက်လေးဆငါးဆပိုမြန်သည် ဤပစ္စည်းပစ္စယသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ နာရီအနည်းငယ်၊ လိုင်းအမြောက်အမြားချွတ်သည်။ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျပြီးအရည်အသွေးကောင်းသည်။...
ကြေးနီဝါယာကြိုးမှစ။ insulator တွင်လည်းချွတ်
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 900 - 1000 / Piece/Pieces
သံချပ်ကာလူမီနီယမ် Cable ကိုဝါယာကြိုးဖျက်သိမ်းရေး Tools များ M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm...
ကြေးနီဝါယာကြိုးချွတ်စက် M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable ကြိုးဖြင့်အချင်းထုတ်လုပ်ခြင်း။...
ကြေးနီဝါယာကြိုး Stripper ချွတ်စက်
စက်ကိုသုံးရန်လွယ်ကူသည်, ထူထပ်သောဖြတ်တောက်ခြင်း၏လိုင်းဆင်းခုတ်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ မော်တာသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ပူပြင်း။ မပူရ။ အောက်ပါဘီးနှစ်ခုသည်အလွန်ကောင်းသည်။ သင်သည်စက်ကိုလွယ်ကူစွာရွှေ့နိုင်သည်။ Ray အရေပြားသည်တစ်ပေါင်လျှင်အနည်းငယ်၊...
အလိုအလျောက် Cable ကိုဝါယာကြိုးခြစ် Stripper
ဝါယာကြိုးချွတ် tool ကို M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable ကြိုးဖြင့်အချင်းထုတ်လုပ်ခြင်း။...
ကြေးနီဝါယာကြိုးချွတ်ဖို့စက် M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 900 - 1200 / Piece/Pieces
လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး stripers M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable ကြိုးဖြင့်အချင်းထုတ်လုပ်ခြင်း။...
အပိုင်းအစကြေးနီပြန်သုံး M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable ကြိုးဖြင့်အချင်းထုတ်လုပ်ခြင်း။...
ဝါယာကြိုးနှင့် cable ကိုစက်ယန္တရား M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 4KW / 5.5KW, 220V / 380V-50HZ ၂-၇၀...
ကြေးနီ Cable ကိုပြန်လည်အသုံးပြုစက်
သတ္တုပြန်လည်စက်တွေ M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable ကြိုးဖြင့်အချင်းထုတ်လုပ်ခြင်း။...
ဝါယာကြိုးချွတ်စက်ငှားရမ်း M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အတူလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘော၊ ဗို့အားမြင့်သောကေဘယ်၊ optical ကေဘယ်၊ တစ်ခုတည်းသောဝါယာကြိုး၊ ပါဝါ - 4KW, 220V / 380V-50HZ ၂-၇၀...
ငွေသားအတွက်သတ္တုအပိုင်းအစ M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အတူလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘော၊ ဗို့အားမြင့်သောကေဘယ်၊ optical ကေဘယ်၊ တစ်ခုတည်းသောဝါယာကြိုး၊ ပါဝါ - 4KW, 220V / 380V-50HZ ၂-၇၀...
ကြေးနီ Cable ကို Slitter စက်ခြစ်
ဝါယာကြိုးချွတ်စက် M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အတူလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘော၊ ဗို့အားမြင့်သောကေဘယ်၊ optical ကေဘယ်၊ တစ်ခုတည်းသောဝါယာကြိုး၊ ပါဝါ - 4KW, 220V / 380V-50HZ ၂-၇၀...
ကြေးနီအဘို့အဝါယာကြိုးချွတ် M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယမ်) အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ရေငုပ်သင်္ဘောကေဘယ်ကြိုး၊ မြင့်မားသောဗို့အားကေဘယ်လ်၊ optical ကေဘယ်ကြိုး၊...
ကြေးနီဝါယာကြိုး Granulator ချွတ်စက်
ကြေးနီ cable ကိုချွတ်ကိရိယာများ M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အလူမီနီယံ)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable...
ဝါယာကြိုး Stripper စက်ရောင်းချခြင်း M-3 စက်မှုအမျိုးအစား အကြီးစားသံချပ်ကာကေဘယ်၊ ကြီးမားသောကေဘယ်၊ စွမ်းအင်ကေဘယ် ACSR (သံမဏိအမာခံနှင့်အတူလူမီနီယမ်)၊ ရေငုပ်သင်္ဘောကြိုးအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါဝါ - 5.5KW, 380V-50HZ 2-160mm cable...
တရုတ်နိုင်ငံ သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper ပေးသွင်း
ကြေးနီဝါယာကြိုး Kabel Granulator
ကြေးနီဝါယာကြိုး Granulator Separator
ကိုယ်ပိုင်ချိန်ညှိ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper
Junky လျှပ်စစ် Stripper စက်
ဝါယာကြိုး Stripper ပြီးတော့ရှုး
ကြေးဝါဝါယာကြိုး Stripper စက်ဖျက်သိမ်း
လက္ကား cable ကိုချွတ်စက်ခြစ်
ကြေးနီ Cable ကိုပြန်လည်အသုံးပြုစက်ရုံ
ကြေးနီ granule ပြန်လည်သုံးသပ်စက်
လျှပ်စစ်ကြေးနီ Cable ကိုချွတ်စက်ဖျက်သိမ်း
ဖျက်သိမ်းကြေးနီ cable ကိုဝါယာကြိုး slitter
သံချပ်ကာ Cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper သံချပ်ကာ Cable ကို Stripper cable ကိုဝါယာကြိုး Stripper
မူပိုင်ခွင့်© 2021 TAIZHOU GUANGLONG WIRE STRIPPING MACHINE MANUFACTURING CO.,LTD All rights reserved ။